Wararka - Maxaa ku dhacaya smartwatches haddii ay wax badan taabtaan biyaha?
Maxaa ku dhacaya smartwatches-ka haddii ay in badan biyaha taabtaan?
Waa maxay qeexitaanka saacad caqli-gal ah oo leh biyo-qabad la'aan? Suurtagal ma tahay in biyaha lala xiriiro waqti dheer?
Xaqiiqdii, heerka boodhka iyo biyuhu ee alaabada elektarooniga ah guud ahaan waxaa muujiya IP. Marka loo eego tiknoolajiyada biyuhu soo saaraan iyo habka wax soo saarka, wax soo saarka Hengmei Technology waxay asal ahaan gaari karaan heerka IP67 iyo IP68 biyo-la’aan. Tijaabada warshadaynta kadib, alaabtu waxay muujinayaan waxqabad aan biyuhu kujirin oo deegaan gaar ah leh, kaas oo ka ciyaari kara kaalin ilaalin ah gunta gaaban.
Waa maxay IPXX Waterproof
IP68 waa heerka ugu sarreeya ee heerka boodh-ka-istaagga iyo heerarka biyuhu ka galaan. Sida loo qiimeeyo qolofka waxqabadka adag iyo kuwa biyuhu galaan, badanaa si loo arko IPXX labada lambar ee ka dambeeya XX.
X-da ugu horeysa waa heerka boodhka ka caaggan, laga bilaabo 0 ilaa 6, heerka ugu sarreeyaana waa 6.
X labaad waa qiimeyn aan biyuhu lahayn, oo u dhexeysa 0 ilaa 8, iyada oo qiimeynta ugu sarreysa ay tahay 8.
IPX0 aan la ilaalin
IPX1 biyaha ayaa ku daadanaya guryaha iyadoo aan wax saameyn ah lahayn
IPX2 saameyn kuma laha marka guryuhu u janjeeraan illaa 15 digrii
IPX3 biyaha ama dhibcaha roobka ee 60 darajo wax saameyn ah kuma laha
IPX4 dareeraha jiho kasta oo qolofka wax saameyn ah kuma laha
IPX5 waxaa lagu dhaqi karaa biyo iyada oo aan waxyeello gaadhin
IPX6 waxaa loo isticmaali karaa qolka, jawiga hirarka waaweyn
IPX7 ku jiri kara biyaha ilaa hal mitir qoto dheer ilaa 30 daqiiqo
IPX8 ku jiri kara biyaha ilaa 2 mitir qoto dheer ilaa 30 daqiiqo
Tani waa wax soo saar shirkadeena ah, magaca sheyga: H68. Imtixaanka ka dib injineeradeenna iyo tijaabiyeyaasheena, isticmaalka saacadda wax saameyn ah kuma yeelan biyo lagu qoynayo hal habeen. Awoodda aan biyuhu lahayn ee kabaalka.
Maxaa loogula talinayaa maydhashada kulul
Xaalada qubayska, waxaad u baahan tahay inaad qubaysato kulul ama qabow.
Guud ahaan, way adag tahay in alaabada elektaroonigga ah ee leh shaqo-biyuhu inay galaan biyaha marka la qabeynayo qabow qabow. Si kastaba ha noqotee, awood darrida xoogan ee moleejooyinka uumiga biyaha ee qubeyska kulul, uumiga biyaha ee ka dhasha qubayska kulul, sawnada iyo guga kulul way fududahay in la galo qaybta hoose ee jijin, taas oo sababi doonta in shaqada jijintu aysan awoodin loo adeegsado kiisaska halista ah.
Biyo-la'aanta iyo uumiga uumiga waa laba fikradood oo kala duwan.
Qalabka guud ma awoodo inuu uumiga biyaha ka ilaaliyo, sida guud ahaan lagu xayeysiiyo 30 mitir quusidda saacad biyo-diid ah oo ku jirta qubeyska kulul wali waxay leeyihiin suurtogalnimada uumiga biyaha. Sidoo kale waa lagama maarmaan in fiiro gaar ah loo yeesho dabbaasha, haddii quusitaanka iyo howlaha kale ay weli halista biyaha yeelan doonaan, iyo haddii lagu dabbaalanayo badda dhexdeeda, biyaha badda ee daxalka leh awgood way fududahay inay sababto wasakhda xiriirinta lacag-bixinta, shaabadaynta giraan caag ah iyo gabow kale oo deg deg ah, iyo shaqada biyuhu u shaqeeyaan ee qalabka ma aha mid waara, waxaa laga yaabaa inay daciifto kolba waqtiga ka dib. Si kasta oo ay jijimmada caqliga u lihi biyuhu u yihiin, waa in aan biyaha hoostiisa lagu isticmaalin muddo aad u dheer. Jijimadda xariifka ahi had iyo jeer waa shey elektaroonig ah oo caqli badan. Si kasta oo ay u sarreyso darajada biyuhu ee jijimadda caqliga leh, haddii aad mar walba ku isticmaasho biyaha hoostooda, waxaa jiri doona daqiiqad biyo ah oo si kama 'ah ah. Sidaa darteed, gacmo dhaqashada maalinlaha ah, qubeyska qabow, maalinta roobka, dhidid waa la gashan karaa, laguma talinayo inaad xirato qubays kulul ama xiriir waqti dheer ah biyo, si loo kordhiyo nolosha adeegga alaabooyinka la gashado ee caqliga badan. Intaa waxaa sii dheer, qalabku wuu dhacaa, kuuskuus ama dhibaatooyin kale ayaa ka soo gaadha, taabashada biyaha saabuunta, jalaatada qubeyska, saabuunta dharka, cadarka, looska, saliida ayaa sidoo kale saamayn ku yeelan doonta u adkaysiga biyaha jijinka.